Yakanyanya Sauce Mukombe Mugadziri uye Fekitori | Huanna
Somunhu nyanzvi mugadziri kuti chete-kushandiswa kunwa mikombe uye chikafu mugaba kwemakore anopfuura gumi nematatu, isu tine hukuru hwakasiyana Pla mugove makapu, Pla ice cream makapu, PLA yekunwa makapu, U mhando PLA makapu, dhiri mukombe / mudziyo, PLA mbiya uye lids kwavari vese. Yedu PLA inotonhora makapu inotsiviwa yakakwana yechinyakare makapu epurasitiki sezvo makapu edu ari 100% compostable uye biodegradable.
Kushanda: Chikafu & Chinwiwa, Dhidhi, Chikafu Chakurumidza, Bato, Bhawa, Kofi Shop Kudhinda Kubata: Kuvhara UV
Style: Imwe Rusvingo Nzvimbo yeKutanga: Shanghai, China
Zita Rekushandisa: NATUREPOLY Model Nhamba: HNC-PC, 4oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz
Feature: Zvishandiso Zvekare, Biodegradable, eco-inoshamwaridzika Custom Order: Gamuchira
Ruvara: Zvakajeka Kurongedza: 50 pcs / sleeve, makumi maviri maoko / kadhi
MOQ: 100,000pcs Yakagadziriswa Packaging: Gamuchira
Certification: EN13432, OK Compost, SGS Chinzvimbo: 1 oz, 2 oz, 4 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz, 20 oz nezvimwewo
Logo: Gadzirisa Mharidzo: Mahara
Somunhu nyanzvi mugadziri kuti chete-kushandiswa kunwa mikombe uye chikafu mugaba kwemakore anopfuura gumi nematatu, isu tine hukuru hwakasiyana Pla mugove makapu, Pla ice cream makapu, PLA yekunwa makapu, U mhando PLA makapu, dhiri mukombe / mudziyo, PLA mbiya uye lids kwavari vese. Yedu PLA inotonhora makapu inotsiviwa yakakwana yechinyakare makapu epurasitiki sezvo makapu edu ari 100% compostable uye biodegradable. Izvo zvinhu zvatinoshandisa inhengo yemhuri yepolyester, uye chinhu chepakutanga chakakwana uye chinogonwazve chakachengetwa mukati megorosi, tapioca zvichingodaro. Mumamiriro ekugadzira manyowa, PLA uye zvimwe zvinogadzirwa nemafuta mukati memazuva zana nemakumi masere, zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikamu zvehupenyu zvinodzikira mumvura uye carbon dioxide. Naizvozvo, makapu edu anotonhora ane hushamwari.
Zvatinotengesa zvinowanzozivikanwa uye zvakavimbika nevatengi uye zvinogona kusangana zvinogara zvichikura zvoupfumi nemagariro zvishuwo zve 18 Makore Fekitori China Diki Package Nyowani Dhizaini Rakaumbwa Sauce Jam Mukombe, Yedu Enterprise Core Nheyo: Mukurumbira wekutanga; Iyo yakajairwa vimbiso; Iyo mutengi ndeyepamusoro .
Makore gumi nemasere Fekitori China Mashoma Package epurasitiki mukombe uye Yakakwira Mhando Yakaraswa Sauce Mukombe mutengo, Zvigadzirwa zvedu zvakakunda mukurumbira mukurumbira kune yega yega nyika dzakabatana. Nekuti kuumbwa kwesimba redu. isu takasimbirira pane yedu nzira yekugadzira hunyanzvi pamwe neazvino mazuva mazhinji ekugadzirisa nzira, kukwezva huwandu hwakakura hwematarenda mukati meiyi indasitiri. Isu tinoona mhinduro yakanaka mhando seyedu yakakosha hunhu hunhu.
Pashure: Saladi Bowl
Zvadaro: U Rakaumbwa Mukombe
Pla Sauce Mukombe